Windows 8 uye UEFI. Iyo yakaipa antecedent yeWindows 11 uye TPM | Linux Vakapindwa muropa
Diego ChiGerman Gonzalez | | GNU/Linux, Noticias
Iyi nhevedzano yezvinyorwa inoshanda zvinangwa zviviri. Yokutanga ndeye ratidza kuti Windows 11 mukana wakanaka wekuwedzera musika weLinux. Yechipiri, kuyambira izvozvo kana Linux ikasatora mukana iwoyo, tinogona kudzokera kumashure makore makumi matatu kumazuva erima ecompass vassalage.
In the Nyaya yapfuura Ini ndakapa maonero angu ekuti Microsoft, ichidzidza kubva mukukanganisa kweBMM, inoedza kusimbisa hukuru hwayo pamusoro pevashandisi, ichivakumbira izvo Hardware yekutenga uye, pamusoro pevanogadzira Hardware, vachiona kuti ndeapi anogona kana asingakwanise kumhanyisa Windows.
Zvino ndinoda kukuyeuchidza nezvezvakaitika kare. Kubva kudiwa kweMicrosoft kuti Linux yakanga isingazive kana yaigona kutarisana nayo.
1 Windows 8 uye UEFI. Iyo Discord Module
1.1 Chii chinonzi UEFI?
1.1.1 Chii chinonzi Secure Boot?
Windows 8 uye UEFI. Iyo Discord Module
Muna Gumiguru 2012, Microsoft yakazivisa kuburitswa kweWindows 8. Akataura zvakare kuti macomputer aida kuunza pre-yakaiswa anofanirwa kushandisa UEFI pachinzvimbo cheBIOS.
Chii chinonzi UEFI?
UEFI ndicho chidudziro muChirungu cheUnified Extensible Firmware Interface kana Unified Extensible Firmware Interface. Basa rayo ndere kutanga zvese Hardware zvakabatana nekombuta uye kuvhura iyo inoshanda sisitimu. Muchokwadi, isu tinogona kuzvitora seyakadzikiswa yekushandisa sisitimu iyo inoitisa kubhowa komputa mamaboardboard uye zvinoenderana Hardware zvikamu. Mune mamwe mazwi, iyi interface inoitisa kurodha chaiyo bootloader mune yakakosha memory. Izvi ndizvo zvichave zvinotangisa zviito zvekutanga zviitwa. Kana yapera tichaona iyo yekupinda skrini iyo ichatibvumidza isu kushandisa iyo inoshanda system.
Sezvazviri zvino nezve TPM, kwete chero komputa yaiwirirana neEFI. Izvo zvinodikanwa kuve neiyo yakakosha firmware pane iyo mamaboard. Iyi firmware inoshandisa iyo UEFI interface senge inoshanda dura kana dura iyo inoshanda semurevereri pakati peiyo firmware pachayo uye nesisitimu inoshanda. Iyo firmware inogara pane memory chip iyo inochengetwa. kunyangwe panodzimwa magetsi.
Yakagadziriswa uye nyore kunzwisisa interface.
Inokurumidza system kurodha.
GPT faira system inotsigira.
Tora zvakazara mukana weanogona kuita makumi matanhatu neshanu mapurosesa.
Easy programming (Uchishandisa mutauro weC).
Remote kutanga uye kugadzirisa.
Vanotyairi vanogona kusunungurwa pamberi pechisimba chekushandisa.
Parizvino, zvakanaka. Asi, iyo nyoka kuseri kweapuro yaive nemazita maviri: Yakachengeteka Bhuti
Chii chinonzi Secure Boot?
Secure Boot chinhu chinotanga kuunzwa neWindows 8, uye chakabatanidzwa sechikamu cheWindows 10. Microsoft pakutanga yaida kuti vagadziri vagadzire-kutanga maitiro avo ekushandisa ayo vashandisi vanokwanisa kuidzima, kunyangwe iWindows.
Izvo zvinofungidzirwa kuti zvakabatsira kudzivirira malware kubva kumhanya kana uchitanga komputa. Mukuita izvi zvakaita kuti zviome kubhogodza kugoverwa kweLinux muLive mode.
Kana PC yatanga, Secure Boot inoongorora siginecha yeese chidimbu chebhuti software, kusanganisira UEFI firmware madhiraivha, EFI kunyorera, uye iyo inoshanda system. Kana masiginecha achishanda, iwo maPC bhutsu uye iyo firmware inoregedza kutonga kune inoshanda system.
Iyo inogadzira inofanirwa kuchengeta iyo yakasimbiswa siginecha dhatabhesi mune isiri-inogadzikana RAM.il firmware. Izvi zvinosanganisira siginecha dhatabhesi (db), iyo yakadzoserwa siginecha dhatabhesi (dbx), uye yekunyoresa kiyi dhatabhesi (KEK).
Iyo siginecha dhatabhesi (db) uye iyo yakadzoserwa siginecha dhatabhesi (dbx) nyora masaini kana mapikicha emifananidzo yeUFI kunyorera, anoshanda masisitimu masheya (senge Microsoft's inoshanda sisitimu mutoro kana faira maneja) .bhuti) uye madhiraivha eEFI anogona kutakurwa pane mudziyo. Rondedzero yakabviswa ine zvinhu zvisingachavimbwa uye zvisingakwanise kutakurwa.
Iyo Yekunyoresa Kiyi Dhatabhesi (KEK) yakasarudzika siginicha kiyi dhatabhesi iyo inogona kushandiswa kugadzirisa iyo siginecha dhatabhesi uye rakadzoserwa siginecha dhatabhesi. Microsoft inoda kuti chakakosha kiyi chiiswe mudura reKEK kuitira kuti mune ramangwana Microsoft inogona kuwedzera masisitimu matsva ekushandisa siginecha kana kuwedzera mifananidzo yakaipa kune iyo siginicha yakadzoserwa.
Verenga zvekare ndima yekupedzisira. Uye iwe uchanzwisisa zvandiri kureva nenjodzi yehunyanzvi vassalage.
Muchikamu chinotevera tichaona kuti Kugoverwa kweLinux kwakagadzirisa sei dambudziko.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Windows 8 uye UEFI. Iyo inotyisa mamiriro eWindows 11 uye TPM
Kune fanboys izvi zvese zvinodzitsvedza, asi iwe unofanirwa kumutsa hana. Ndichiri kurangarira ndichishuvira pandakatakura iyo DOS pane iyo IBM, pane 5-1 / 4 disks ... ini ndaona maitiro ese ekushanduka kwekambani ino kusvika nhasi uye ini ndazvitambura munyama yangu; mushure meinonhuhwirira kunouya kuuraya. Ndakabuda mumotokari mwedzi mishoma yapfuura nekuti handikwanise kubuda mairi. kutambisa nguva yangu, kutambisa mari yangu uye nesimba rangu papuratifomu, iyo yakaunganidza zvakaipisisa zveGoogle uye zvakaipisisa zveApple. Pakupedzisira kukara kunotyora bhegi.
Makorokoto pazvinyorwa zviviri izvi, izvo zvaunotaura ndezvechokwadi, Microsoft ichiri zvazviri uye isu isu takatomuka kubva kumatrix hatifanirwe kungoteerera mafambiro aya, asi neimwe nzira kuva vatauriri veiyi ruzivo uye vazivise Njodzi idzo dzinofambiswa neaya mafambiro kune ramangwana kune aya makambani, uyu ndiwo mukana mukuru weGNU / Linux kuwana nzvimbo mumakambani uye mudzimba.